Dowladda soomaaliya oo ciidamo kala dhex dhigtay maleeshiyo Dagaalantay – XAMAR POST
By Zakariye iiman On Jul 3, 2019
Waxaa inta badan lagu guuleystay in xabad joojin la kala dhex dhigo beelihii dagaalka khasaaraha badan dhaliyay uu ku dhexmaray deegaano hoostaga degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan.
Xalinta dagaaladaas ayaa waxaa ku jiray Xildhibaano uu ka mid yahay Nuur Iidow Beyle oo ka tirsan golaha Shacabka ,waxaana uu sheegay in lagu guuleystay in dagaalkaas la joojiyo.
Xildhibaanka oo la hadlay Idaacadda Risaala ayaa waxaa uu sheegay inay maleeshiyaadka dagaalamay kala dhex dhigeen Ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed,isla markaana uu socdo dadaalo nabad lagu kala dhex dhigayo beelahaas.
Dhinaca kale Xildhibaan Nuur Iidow Beyle ayaa waxaa uu faah faahin ka bixiyay wadahadalladii ay ka dhex wadeen Guddoomiyihii xilka laga qaaday ee Gobolka Hiiraan balse diiday ee Yuusuf Axmed Hagar Dabageed & Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Si kastaba dhawaan xubno ka tirsan Golaha Wasiirada iyo Xildhibaano ka tirsan Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay sheegeen inay xal ka gaari waayeen xiisada u.dhaxeysa Madaxweyne Waare & Yuusuf Axmed Hagar Dabageed,isla markaana ay dalbadeen inay soo farageliso dowladda Soomaaliya.
Guddiga Maalmaha Xorriyadda Qaranka oo kulan la qaatay madaxweyne farmaajo